Tantara mandaloPosté par Berïnson 2016-06-02 21:50
- Be izay nosoratako momba ny fitiavana izay hany ka nisy fotoana aza ninoako fa tsy manana hosoratana momba ny fitiavana intsony aho. Saingy androany tsy mety fa... androany tsy maintsy hanoratra... tsy maintsy holazaiko anao...
- Ny inona no holazainao ahy?, hoy i Tovo nibetroka nanapaka ny fahanginana nitadiavana izay teny hofidiana tsy handratra lalina loatra ny iray.
- Mitonia ianao dia mipetraha fa aza mora sendaotra toa io, hoy i Noro nanalefaka ny feony, ny masony tsy miala eny amin'ny totohondry mivonkin'ilay malalany.
- Fantatrao i Tojo "sarim-bavy", ilay niara-nianatra tamiko hatrany amin'ny kilasy fahafito. Hay ao amin'ilay trano fanontam-boky eo amin'ny kihon-dalana hidina ho any am-piasana iny izy no miasa. An-dalana andeha hisakafo atoandro aho no nahita azy nivoaka avy tao. Efa ho roa volana izao mihaona foana izahay isaky ny atoandro. Fantatrao fa na izy na izaho, samy nitempo fitiavana mangina saingy... Fantatrao fa ny antsika...
- Lazao hatramin'ny farany izay tianao hotenenina e!, hoy i Tovo manindry mafy ny fahatezerany.
- Mety mbola tia azy aho angamba, ry Tovo...
- Fa ianao ve vehivavy tsisy saina e?
- Tsy saro-kenatra intsony toy ny taloha izy fa mifampiresaka tsara sy mifankahazo izahay...
Samy nangina tsy nisy nihetsika teo amin'ny toerany izy roa. Ny feon'i Tovo mifendrofendro hitomany no nanapaka izay samy eritreritra mangina tany.
- Mieritreritra ny hiala amiko ve ianao noho i Tojo? Izay no tianao hahatongavana?...
Noro! Manontany anao aho!
- Nomeny ahy ity taratasy ity androany saingy tsy navelany hovakiako raha tsy aty an-trano, hoy i Noro sady nanipy ilay taratasy teny am-pofoan'i Tovo izy toy ny hoe miaro ny tanany tsy ho voasambotr'ity olon-tiany efa kivy ambony ihany.
Nosokafany tsy am-pisalasalana ilay taratasy hamakiany izay raketiny. Ny masony roa mihavonton-dranomaso tsikelikely anefa tsy nahavaky nisesy ity taratasy malamalama notsongaina amborahana fitia. Teny mitsitoko no vinakiny kisendrasendra. Be izay taona very izay... misy hoavy mamiratra ho antsika... raha mbola mitempo kely ho ahy... miandry valin-teny avy aminao... Nihodina taminy ny tany aman-danitra.
- Lehilahy tsy vanona, hoy i Tovo, mivakavaka fiteny. Lehilahy tsy vanona!
Izay dia nitambotsitra izy.
Lalasoa (Gothenburg, taona 2016)
Fakafaka tononkaloPosté par Berïnson 2016-05-21 11:55
Efa ho iray volana katroka izao no nanoratan'i DadaRabe, Andriamanarivo Paoly Rabe, ny tononkalo "Rehefa filoha aho!". Io tononkalo io no omena toerana eto androany ka hofakafakaina sy hakàna lesona.
Rehefa filoha aho...
Ary tsy ho garazin'
ireo mazàna gisitra
Fa ny olona madio
Sy tia ny tanàna
No hitondra an'io!
...Rehefa filoha aho !
Ny tononkalo dia miresaka momba izay hataony rehefa filoha izy: ny faniriany, ny fikasany na angamba aza ny voadiny. Eo amin’ny lohateniny ”rehefa filoha aho” fotsiny dia efa azon’ny mpamaky sahady fa hitanisa izay hitranga na izay hataony rehefa izany izy ity. Ahatsiarovako zanaka iray mivoady amin’ny tenany noho ny ratsy ataon’ny rainy ity tononkalo ity. Raha mpisotro toaka, mpamono vady aman-janaka, mpijangajanga ny rainy dia mivoady izy fa rehefa lehibe dia ho tia ny vadiny, hikolokolo ny zanany ary tsy hisotro toaka sy tsy hampirafy izany izy.
Eo am-pamakiana ny tononkalo dia tsapa sy fantatra ny zavatra irina sy ny zavatra ankahalaina sy tsy tiana hisy na hiainana. Fa ny ”maramara”, zavatra ratsy toy ny harem-pirenena atao ”pasipasy” dia tsy hisy intsony fa ny ”miasa sy mazoto, mijoro amin’ny marina” no ankasitrahana. Malahelo sy tezitra noho ny zava-misy ilay ”aho” ao amin’ny tononkalo ka manao drafitra izay hataony rehefa filoha izy.
Ny tononkalo dia voarafitra ho andininy 5 ka ny andininy tsirairay narafitra mitovy samy manana andalana 8 avy, miady rima ABABCDCD. ”Zanahary”, ”tany”, ”tsy hanary”, ”mamy”, ”isika”, ”hahavita”, nosindrazantsika” sy ”tafita, ohatra, no narafitra eo amin’ny andininy farany. Misy andalana iray miverimberina manelanelana ny andininy avy: ny hoe ”rehefa filoha aho”. Mandrindra sy manamora ny famakiana sy fahazoana ny hevitra tiana ambara ireo teny ireo miverimberina. Na dia mahery fo sy feno fanantenana aza ny tononkalo dia ahitana soritra na fahadisoam-panantenana sy hatezerana ao anatiny. Ohatra: ”tsy ho garazin’ireo mazàna gisitra ny asam-panjakana”; miseho eto, araka izany, ny fihetseham-po maratra arahin’ny fahatapahan-kevitra ho amin’ny tsara, ”fa ny olona madio sy tia ny tanàna no hitondra an’io!”
Ny …, teboka telo koa dia miverimberina efa ho inteloambinifolo eto. Ny teboka telo dia mariky ny fiatoana na ny zavatra maro tiana ambara saingy tsy ho voatanisa ka fintinina amin’ny teboka telo. Azo inona kokoa fa noho ireo fihetseham-po samihafa misafotofoto ireo no mahatonga izany na dia hoe misava ihany aza izany eo amin’ny faran’ny tononkalo.
Raha ny teny ampiasain’i DadaRabe indray dia teny mora azo sy fampiasa andavanandro. Ny ”ekôlazy”, ”garazy”, ”krizy”, ”pasipasy”, ohatra, dia teny nogasiana, nampiasaina hahazoana tsy amin’ny fomba sarotra ny tian’ny mpanoratra ampitaina. Ny ampitàna ny hafatra dia ”ny Malagasy” tompon’ny harena sy ”i Gasy kely” isam-batan’olona. Miharihary tahaka ny vay an-kandrina mantsy ny fahoriana lalina mahazo ny tanindrazana. Koa rehefa tsy nahomby ny fitondrana teo aloha nifanesy dia mandini-tena sy miova filamatra isika.
”Rehefa filoha aho!”. Tsy fantatra hoe iza ilay ”aho” ao anaty tononkalo. Mety ho i DadaRabe ihany. Mety ho olon-kafa koa. Raha i DadaRabe dia tsy mahagaga velively satria manana ny antony rehetra hahavitany manatanteraka ireo teny omena ao anaty tononkalo izy. Nanovo fianarana ambony momba ny fitondrana izy ary manana traikefa mafonja azo araraotina hananganana indray ny firenena. Satria miresaka ny fiainam-pirenena malagasy ny tononkalo dia azo inoana koa anefa fa mety tsy ho miresaka ny tenany i DadaRabe eto fa mamboraka ny fanirian’ny mpiray tanindrazana aminy hanana Madagasikara ”mandroso sy tafita”. Firifiry moa ny Malagasy mangetaheta fiovana sy fanadiovana tanteraka ny fitondrana ankehitrio voaloton’ny fitiavan-tena sy ny kolikoly? Firifiry no tofoka sy leo tanteraka ny mpitondra ka loa-bava koa hoe: Aok’izay!?